CIIDAMO SI GAAR AH U UGAADHSANAAYA AL-SHABAAB OO MOQADISHO LAGA ABAABULAY | Toggaherer's Weblog
Kadib Markii lagu guuldaraystay dhex-dhexaadin laga dhex waday Golaha Maxkamadaha iyo Argagixisada Al-Shabaab, ayaa Maxkamaduhu dhankooda ka bilaabeen qorshe ay iskaga caabinayaan weerarada kaga imaanaya dhinaca Al-Shabaab. Weeraro rogaal celin ah oo ay qaadeen ciidamada Maxkamaduhu todobaadkan ayey ku dileen ugu yaraan 20 xubnood oo ka tirsan Argagixisada Al-Shabaab.
Ciidamada Golaha Maxakamadaha ayaa dhisay laba kooxood oo ugaadhsada xubnaha Al-Shabaab si ay uga sifeeyeen Magaalada Muqdisho. Madaxdii kooxda Al-Shabaab ayaa gebi ahaan iskaga baxay Muqdisho labadii todobaad ee la soo dhaafay, waxana hada la ugaadhsanayaa dhalinyaro yar yar oo ka tirsan Al-Shabaab Muqdishana u jooga in ay laayaan xubnaha dowladda Shariifka ka tirsan.
Haddii uu sii socdo is-ugaadhsigan u dhexeeya labadan kooxood ayaa waxa laga cabsi qabaa in uu galaafto dad badan oo aan waxba galabsan loona dili doono shaki iyo hubsiino la’aan ku saabsan dagaalka u dhexeeya labadan kooxood.